डल्ले च्याउ लगाउने बेला भयो, कसरी गर्ने यसको खेती ? - Parichay Network
डल्ले च्याउ लगाउने बेला भयो, कसरी गर्ने यसको खेती ?
परिचय नेटवर्क द्वारा	 १३ माघ २०७६, सोमबार ०८:३३ मा प्रकाशित
च्याउ खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ । शाकाहारी जीवनशैली अपनाउनेहरुका लागि च्याउको सेवन मासु जत्तिकै हुन्छ । तसर्थ च्याउ हाम्रो भान्साको अभिन्न तरकारीको रुपमा आएको छ ।
पहिले पहिले च्याउ खानु राम्रो मानिंदैनथ्यो । च्याउ खाने भएपनि जंगली च्याउ खोजेर खाने गरिन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा विषालृु च्याउका कारण मानिसको ज्यान नै जाने खरेको खबर आउँथ्यो । तर अहिले च्याउको व्यवसायिक खेती गर्न थालिएको छ । जसका कारण कृषकहरुले मनग्ये आम्दानी लिन सफल भएका छन् । च्याउ विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । ती मध्येको एक हो गोब्रे च्याउ ।
अहिले यो च्याउको खेती गर्ने मौसम शरु भएको छ । गोबर भएको ठाउँमा उम्रने भएकाले च्याउको यो प्रजातिलाई गोब्रे च्याउ भनिएको हो । यो च्याउ चिसो हावापानि भएको ठाउँमा उम्रने भएकाले यसलाई पहाड, उपत्यका वा तराईमा मौसम अनुसार खेती गर्न सकिन्छ ।
कसरी गर्ने त गोब्रे च्याउको खेती ?
काठमाण्डौं उपत्यकामा असार—श्रावणमा मल बनाई भाद्रमा बीउ रोप्ने र पुष—माघमा मल बनाई फाल्गुणमा बीउ रोप्नुपर्छ ।
गोब्रे च्याउको लागी कम्पोष्ट मल तयार पानुपर्छ ।
एक टन परालको कम्पोष्ट मल तयारी गर्न चाहिने सामग्री
च्याउको बीउ २० वोतल वा ५ कि.ग्रा.
कम्पोष्ट तयार गर्ने विधि
टुक्राएको पराललाई चिसो पानीमा ८/१० घण्टा डुवाउने ।
काठको फ्रेम (५ फिट लम्बाइ ५ फिट चौंडाइ र १ फिट उचाइ) को सहायताले परालको तहतह गरी थिच्दै हरेक ३÷४ तह (१ हात) पछि एक पसारोको दरले मल छर्ने र ४ फिटसम्मको उचाई बनाई ५०० के.जी.सम्म पराल अट्ने गरी पुष्ट पार्ने ।
यो अवस्थामा कम्पोष्टको रङ्ग हल्का खैरा, चिस्यान ६० प्रतिशत र पि.एच. ६–६.५ हुनु पर्दछ ।
कम्पोष्ट वेडको तयारी
च्याउ खेती गरिने कोठालाई २ प्रतिशतको फर्मालिनले सफा गर्ने । सो कोठामा ३–४ फिट चौडाई र ६–८ इन्च उचाईका कम्पोष्ट वेड काठको याकमा बनाउने । भुईंमा पनि वेड बनाउन सकिन्छ ।
१ टन परालको लागि २० बोतल बीउ आवश्यक पर्छ ।
कोठाको तापक्रम २२–२५ डिग्री सेल्सिएस र सापेक्षिक आर्द्रता ८०–८५ प्रतिशत राख्ने ।
१५–२० दिनमा कम्पोष्टमा सेतो ढूसी रेखाले ढाकेको देखिन्छ ।
बीउ छरेको २ हप्ता पछि वेडको माथिल्लो तह ढाक्नको लागि मिश्रण (माटो) तयार गर्ने । यसको लागि १०० के.जी. मसिनो माटो २ के.जी. चूना र फर्मालीन पानीको घोल (२५एम.एल. र ५ ली) एकै ठाउँमा मिसाई प्लाष्टिकले ढाकी ४८ घण्टा राख्ने र पुनः राम्ररी चलाउने । सो मिश्रणले १ इन्च बाक्लो हुने गरी वेडलाई छोप्ने र बिहान बेलुकी हल्का पानी दिने ।
शुरुमा तीन हप्तासम्म २२–२५ डिग्री सेल्सिएस र सापेक्षिक आद्रता ८०–८५ प्रतिशत राख्ने र त्यसपछि १५–१८ डिग्री सेल्सिएस र सापेक्षिक आद्रता ८०–९० प्रतिशत हुने गरी मिलाउने ।
रोग र कीरा नियन्त्रण
कीरा नियन्त्रणः झिँगा एवं सुलसुलेको असर देखियो भने सुलसुलेको लागि ०।१ प्रतिशत र झिँगाको लागि ०।२ प्रतिशत नुभानको घोल बनाएर छर्कने । अवस्था हेरी फेरी एक पटक दोहो¥याउने । विषादी छरेपछि च्याउ टिप्न ४ दिनसम्म पर्खनु पर्छ ।
च्याउ रोपेको व्याड माटोले ढाकेको ३ हप्ता पछि च्याउ टिप्न लायक हुन्छ । च्याउ टिप्दा बोटलाई समातेर एकातर्फ बटारी हल्कासँग टिप्नु पर्दछ । च्याउ टिपेपछि जरा हटाई उपचार गरिएको माटोले पुनः पुरी हल्का पानी दिनुपर्दछ । एक टन परालको कम्पोष्ट २००–३०० किलोग्रामसम्म ताजा गोब्रे च्याउ उत्पादन हुन्छ ।